Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Khasaare Culus Gaystay oo Afqaanistaan Kadhacay.
Qarax Khasaare Culus Gaystay oo Afqaanistaan Kadhacay.
Qarax ismiidaamin baabuur ah oo ay kooxda Taliban fulisay ayaa ugu yaraan 24 qof ku dilay, islamarkaana 40 kale ku dhaawacay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan.
Qaraxa ayaa dhacaya, xilli baska uu marayey suuq aad ay dadka u buuxaan, taasi oo khasaare xooggan gaadhsiisay dadkii ka adeeganayey iyo dad marayey waddada, sida ay goobjoogeyaal u sheegeen weriyayaasha. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dhimashada ay kordhi doonto.
Afhayeen u hadlay booliska Kabul ayaa saxaafada u sheegay in dhibanayaasha ay badankood yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka. Kooxda Taliban ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxan, oo ay tiri in lala beegsaday laba baabuur oo ay saarnaayeen shaqalaaha hay’adda sirdoonka Afghanistan ee NDS, ayna dileen 38 ka mid ah.